အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေကို မြန်မြန်နဲ့ မှန်မှန် ဘယ်လို လေ့လာမှတ်သားရမလဲ ? | MyanLearn Article
အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေကို မြန်မြန်နဲ့ မှန်မှန် ဘယ်လို လေ့လာမှတ်သားရမလဲ ?
အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရ (Vocab) တွေ ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ စာစဖတ် တတ်ကြတဲ့အရွယ်ထဲက A P P L E ပန်းသီး C A T ကြောင် စသည်ဖြင့် အသံကုန် အော်ရင်း မှတ်ကျက်ခဲ့ရတာမျိုးပါ။ အသက်တွေကြီးလာတဲ့အမျှ မှတ်ရတဲ့ စကားလုံး အသစ်အဆန်းတွေ တိုးလာတယ် ခက်လာတယ်ပေါ့။
ပြဿနာက မှတ်ရတာ များလာ တဲ့အခါ တစ်ခါတရံ မေ့သွား ရောသွားတတ်ကြတာမျိုးတွေ ဖြစ်တတ်တာပါ။ ဥပမာ ဒီစကားလုံးကို ဘယ်လို ခေါ်လဲ မြင်ဖူး မှတ်ဖူး နေပါရက် ခေါင်းထဲမှာ အစဖော်လို့ မရတော့တာမျိုးပေါ့။ ပြန်မှတ်လဲ ခဏနဲ့ ပြန်မေ့။ ဒီလိုနဲ့ အကြိမ်ကြိမ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ နောက်ပိုင်းကျ ဝေါဟာရတွေကို မှတ်ရမှာ မကြိုက်တော့တာမျိုး ဘယ်လို မှတ်မှတ် မမှတ်မိတော့တာမျိုး အမြဲ ရောထွေးနေတာမျိုး ဖြစ်လာပြီး အင်္ဂလိပ်ဘာသာမှာပါ အားနည်းလာကြတာပါ။
ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ အင်္ဂလိပ်ဝေါဟာရတွေကို မြန်မြန်နဲ့မှန်မှန် ဘယ်လိုနည်းတွေနဲ့ လေ့လာ ကြမလဲ ဆိုတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ကိုယ်မေ့တတ်တဲ့ မှတ်မိရခက်တယ်လို့ ထင်တဲ့ ဝေါဟာရမျိုးတွေဆို စာအုပ်ထဲမှာ ဖြစ်စေ၊ ဖုန်းမှတ်စု ထဲမှာ ဖြစ်စေ မှတ်ထားတာမျိုးက တခါတရံ ပြန်လည် ရှာရမှတ်ရတာမျိုး လွယ်ကူစေသလို၊ ဒီတိုင်းခေါင်းထဲ မှတ်လိုက်တာထက် ချရေးရင်းမှတ်လိုက်တာမျိုးက ပိုမှတ်မိလွယ်တယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဝေါဟာရတွေကို တစ်လုံးချင်း မှတ်ထားတာထက် စာရင် စာကြောင်းတွေနဲ့ တွဲ ဖတ်ရင်းမှတ်တဲ့အခါ ဒီလို Vocab မျိုးတွေက ဒီလို စာကြောင်းမှာ ဒီလို အခြေအနေမှာ သုံးထားတာပါလားဆိုပြီး ခေါင်းထဲမှာ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ တကွ ပိုပြီး မှတ်မိရလွယ် ပုံဖော်ရ လွယ်ကူပါတယ်။
အဘိဓာန်တွေမှာ ဝေါဟာရ တစ်လုံးကို ရှာရင် အဓိပ္ပာယ်တူ အခြားဝေါဟာရအမျိုးမျိုးကိုပါ ဖော်ပြထားတဲ့အတွက် မြန်မြန်နဲ့ များများ တွဲဖက်လေ့လာထားလို့ရပါသေးတယ်။
ကလေးလေးတွေ ဝေါဟာရ စတင်လေ့လာစဉ်မှာ Flashcards လို ပုံပါတဲ့ ကဒ်လေးးတွေနဲ့ တွဲပြီး လေ့လာသလိုပေါ့။ တခါတရံ ကျွန်တော်တို့လည်း ဘယ်ပစ္စည်းက ဘယ်ဝေါဟာရဆိုတာ တွဲပြီး မှတ်မိနေစေဖို့ ကိုယ့်ဘာသာ ပုံဆွဲကြည့်တာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ပုံပါတာမျိုး နဲ့ တွဲဖက် မှတ်ထားတာမျိုး ဖြစ်ဖြစ် လေ့လာကြည့်ပါ။ ဒီလိုလေ့လာခြင်းက ကျွန်တော်တို့ အများစု ဖြစ်နေကျ အရာဝတ္ထု တစ်ခုခု ကို မြင်နေပါရက် ဘယ်လို ခေါ်မှန်းမသိ မေ့နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းနိုင်မှာပါ။
✔MyanLearn App Viber Community ကို Join ထားပါ။
Perfect နဲ့ Myanlearn မှ ပူးပေါင်းကျင်းပတဲ့ Give away အစီအစဉ်
Word of the day လိုမျိုး နေ့စဉ် နေ့တိုင်း ဝေါဟာရ အသစ်အဆန်းတွေကို လေ့လာချင်တယ်ဆိုရင်တော့ "Learn vocab with MyanLearn" က သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံးပါ။
နေ့စဉ် အသုံးပြုနေကြ အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွေကစလို့ လုပ်ငန်းခွင်သုံး အင်္ဂလိပ် ဝေါဟာရတွေစီကို အသံဖိုင်နဲ့အတူ ဘယ်လို နေရာတွေမှာ အသုံးပြုရမလဲ စတဲ့ ဥပမာ သာဓက တွေနဲ့ ရှင်းလင်းတင်ပြပေးထားတာမို့ ဝေါဟာရတစ်ခုချင်းစီတိုင်းအတွက် အသံထွက်အမှန်၊ ပြောပုံ ဆိုပုံ၊ ရေးသား အသုံးပြုပုံတွေ အထိပါ တွဲပြီး လေ့ကျင့်လေ့လာသွားနိုင်ဦးမှာဆိုတော့ အိမ်မှာနေရင်း အကျိုးရှိစေဖို့ ခုပဲ Join ထားလိုက်ပါဦး။
Link - https://vb.me/myanlearn_mm_2021
ဒီလောက်ဆို ဝေါဟာရတွေကို မြန်မြန်နဲ့မှန်မှန် ဘယ်လို လေ့လာသွားရမလဲ ဆိုတာ ယေဘုယျအားဖြင့်တော့ သိရှိမှတ်သားသွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။
Elite Training Myanmar
IELTS Exam Preparation Course (Private Group Section)
The Embassy of Education
English Language - 4Skills ( Level 4+5+6 )
English Language -4skills ( Level 1+2+3)